एक शिक्षकको संघर्षगाथा र साहित्यप्रेम – Nepal Press
एक शिक्षकको संघर्षगाथा र साहित्यप्रेम
२०७८ साउन २ गते ८:०५
रुपन्देही । रुपन्देही र पाल्पाको दोभानको एक विद्यालयमा लामो समय अध्यापन गरेका दलबहादुर गुरुङको परिचय कहिल्यै मास्टरीमा मात्रै सीमित रहेन । गाउँको विद्यालयमा साढे २१ वर्ष शिक्षण गरेर सेवानिवृत्त भएका उनलाई पहिलेदेखि नै पढाउनेबाहेक घुम्ने, जे देख्यो टिप्ने, लेख्ने र प्रकाशन गर्ने लत बसेको थियो । उनले चकडस्टर छाडेको पनि ७ वर्ष भयो तर उनका अक्षरखेती त्यसपछि झन् मौलाएको छ ।
गाउँटोलको विकासे राजनीतिसँगै निरन्तर लेखन उनको दैनिकी जस्तै हो । नागरिकले बोल्ने र बुझ्ने भाषामा लेख्ने लेखकको पहिचान बनाएका गुरुङलाई गाउँटोलको विकासको पनि उस्तै पिरलो छ । अहिले रुपन्देहीमा बस्न थाले पनि उनी पाल्पाको विकास कसरी गर्ने भनेर घोत्लिरहन्छन् । र पटक–पटक ,पाल्पा पुगिरहन्छन् ।
शिक्षण पेसाको सुरुवात
साथीहरुको लहैलहैमा २०४८ सालमा रुपन्देहीको भैरहवा शिक्षा कार्यालयमा पुगेर शिक्षा आयोगको फारम भरे । परीक्षा दिए । लिखितमा नाम निस्कियो ।
उनी भन्छन्– अन्तर्वार्तामा अनेक भाँतीका प्रश्नहरु सोधे, सकेजतिको उत्तर दिएँ । नतिजा आउँदा राम्रै आयो । मेरो नाम शिरतिरै निस्कियो । नाम निस्किएपछि खुसी लाग्यो । दुःख पनि । जागीर खानुअघि बटौली बजारमा व्यापार गरिन्थ्यो । आफ्नै व्यापार थियो । स्कुलजस्तो १०–४ बजाउनु पर्थेन । आफ्नो खुशी थियो । दैनिक पैसो छाम्न पाइन्थ्यो । खल्तीमा पैसो कहिले टुट्थेन । शिक्षण पेसामा लागेपछि कहिलेकाँही ४ महिना पैसो देख्न नपाउँदाको पीडा सुनाउन सक्दिनँ ।
आमाले यस्तो जागीरबाट उन्नती हुँदन भनेर धेरै सम्झाउनुभयो, गुरुङलाई । अनि उनले जागिर छाड्ने प्रयास पनि गरे । तर साथीहरुले स्थायी जागीर छोड्नु हुँदैन । साथीहरु भन्थे– भोलिपर्सि तलबमा वृद्धि हुन्छ । बुढेसकालमा पेन्सन खान पाइन्छ । उनी भन्छन्– साथीहरुको कुरा हो जस्तै लाग्यो । जागिरमा टिकियो । सुरुमा जागिर रुपन्देहीको हरैया माविमा थियो । पछि तराईको सुविधा छाडेर पाल्पातिर उक्लिइयो ।
दोभान माविका तत्कालीन सहायक प्रधानाध्यापक अमर प्रधानले बटौली छाडेर पाल्पा नजान सुझाएको सम्झन्छन्, गुरुङ । अहिले उनी पछुताउँछन् ।
उनी शिक्षण गर्दाका दुःख, संघर्षका सन्दर्भ यसरी बताउँछन्–
हरैया मामिमा नियुक्तिपत्र बुझेर फित्तेवाला चप्पल पड्काउदै भदौ महिनामा जाँदा त्यहाँका शिक्षकहरुले मेरो रुपलाई बेस्सरी तलदेखि माथिसम्म नियालेका थिए । त्यो उनीहरुको दृष्टि आजसम्म मस्तिष्कमा नाचिरहन्छ । सबैलाई लागेको हुन सक्छ– यो जाबो फुच्चाले के पो पढाउँला ! शुक्रबारको दिन थियो । नियुक्तिपत्र बुझाएर पहिलोपटक हाजिर भएँ । आइतवारदेखि पढाउन आउँछु भनें । अनि थोत्रो साइकलमा घरतिर हुँइकिएँ ।
‘नामर्दले खाने जागिर भन्दा झस्किएँ’
एकदिन हरैयामा रहेको गुरुङ गाउँमा स्वागतका लागि बोलाइयो । निधारभरि रातोटीका र माला लगाइ स्वागत गरे । त्यति नै बेला एकजना रिटायर्ड लाहुरेले भनेका थिए– केटा तैले बाहुनले खाने जागिर खाइस् । यो त नार्मदले खाने जागिर पो हो ! मगर, गुरुङ त लाहुरे हुने पो हो !
उनले बोलेका शब्दले स्वागत होइन, अपमान गरिहरेको भान भो मलाई । म केही बोल्न सकिनँ र अन्त्यमा मैले भनेको थिएँ– जागिर र मान्छेको कुनै जात हुँदैन । हरैया पहाडीयाहरुको रमाइलो तराई बस्ती हो । मैले जागिर खान गइसकेपछि पाल्पाको दोभानबाट मिल्ने साथी राजेश श्रेष्ठलाई इभरग्रीन बोर्डिङ स्कुलमा प्रिन्सिपल हेम मल्ल ठकुरीसँग कुराकानी गरी जागीरका लागि उतै लगेको थिएँ ।
आइकम पास भएपछि ऊ दोभान फर्कियो । अनि मलाई हरैया बस्न मन लागेन । फर्कने विचार गरें । हजारौं बिन्तिपछि हरैया उमाविबाट दोभानको नुवाकोट सरुवा भइ आउने अवसर पाएँ । पाल्पा, दोभानको नुवाकोटमा ४ वर्ष पूरै बिताइयो ।
त्यतिबेलाको हौसला, अहिले गरिखाने औजार !
दोभान मावि जागिर सरुवा हुन साह्रै गाह्रो भो । अन्तिममा सबैको सहयोगले सर्ने मौका पाइयो । म सरुवा भइआउँदा रुपकुमार क्षेत्री हेडसर हुनुहन्थ्यो, दोभान माविमा । दोभान माविमा आउँदा मैले आइकम उत्तीर्ण गरिसकेको थिएँ ।
साथै सिएमएमा नेपाल दोस्रो हुने अवसर प्राप्त गरिसकेको थिएँ । यदि शिक्षा क्षेत्रमा नआएको भएँ म यतिबेला स्वास्थ क्षेत्रमा हुन्थें । मेरो पढाइ पूरा भएको ठानेर हात बाँधेर बस्ने विचार गरेको थिएँ ।
एकदिन रुपकुमार सरले भन्नुभयो– दलबहादुर तिम्ले जे जसरी भएपनि बिएड उत्तीर्ण गर्नुपर्छ । उहाँको वचन राख्नका लागि भरतपुर चितवनको सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना भएँ । निरन्तर क्याम्पसको कक्षा नलिइ परीक्षाका बेलामा जाँच दिएर बिएड उत्तीर्ण गरें ।
उहाँ रुपन्देहीको भैरहवा सरुवा हुनुअघि नै मैले बिएड पास गरिसकेको थिएँ । सायद म पास हुँदा मभन्दा रुपकुमार सर धेरै खुशी हुनुहुन्थ्यो । उहाँको हौसला मेरो लागि आज गरिखाने औजार भएको छ ।
उहाँले दिनुभएको हौसलाले दुई विषयमा स्नातकोत्तर गरेर उच्च मावि अध्यापनका लागि सहायक बन्यो ।
पत्रकारिता पढाउँदाको आनन्द
रुपकुमार क्षेत्री भैरहवा सरुवा भइ जानुभयो र भेषराज पोखरेल निमित्त हेडसर बन्नुभयो । उहाँका समयमा दोभान माविलाई उच्च मावि बनाउनुपर्छ भनेर धेरैपटक बैठक छलफल र अन्तरक्रिया भए ।
त्यति समयमा नै पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको पहिलो स्कूलका रुपमा यस विद्यालयमा पत्रकारिता विषय पढाइका लागि पहल र सुरुवात भयो । पत्रकारिताका कारण राष्ट्रिय रुपमा यस विद्यालयले चर्चा पायो ।
अहिले त शिक्षण पेसा जागिर होइन, समाज परिवर्तन गर्ने यात्रा रहेछ जस्तो लाग्छ । एकजना शिक्षकले भुलेर पनि गल्ती गर्यो भने एक युगलाई नै गलत मोडमा पुर्याउँछ । तसर्थ १०–४ को ड्युटी मात्रै शिक्षण होइन ।
शिक्षा पत्रकार समूह काठमाण्डौ, पत्रकार महासंघ रुपन्देही र पाल्पाका जिम्मेवार पत्रकारहरु दोभान माविमा पढाइ हुने विषयका बारेमा बुझ्न आए । मार्टिन चौतारी, नेपाल प्रेस इन्स्च्यिूटलगायतका संस्थाहरुले पत्रकारितासम्वन्धी पुस्तक दिएर सहयोग पुर्याएका थिए ।
पत्रकारितामा विद्यार्थीको उत्तीर्ण दर राम्रो थियो । एसएलसीमा शतप्रतिशत उत्तीर्ण भइरहेका छन् । तर, खोइ किन यो विषय नपढाउने कुरा व्यवस्थापन पक्ष सम्हालेका मित्रहरुले गरे ? तरपनि पहिलोपटक यो विषय पढाउने पहिलो शिक्षकका रुपमा आफूलाई उभ्याउन पाउँदाको क्षण मैले शब्दमा उतार्न सक्दिनँ ।
‘शिक्षण जागिर मात्रै होइन रहेछ’
कहिलेकाहीँ विद्यालयका लागि समयको खाँचो पर्यो भने सक्दो समय दिन मात्र होइन, नियमित एक–दुई घण्टा विद्यालयको लागि समय छुट्याएर नयाँ सोच सकृयताकासाथ अघि बढ्नुपर्छ, हरेक शिक्षकले । तर, हामी शिक्षकहरु चार बजेको घण्टी पनि ढिलो लाग्यो कि भनेर कहिलेकाँही घडीलाई दोष दिन पछि पर्दैनौं ।
हामीलाई जहिले पनि हतार हुन्छ । हतारको बयान गरी साध्य हुँदैन । आखिर हतारको अन्त्य एकदिन हुन्छ नै । त्यसैले धैर्यता पनि उत्तिकै खाँचो पर्दछ । हतार र धैर्यताको फ्युजनबाट नयाँ सोच र विचारको जन्म हुने भएकोले यी दुवै पक्षलाई मिलाएर लैजानुपर्छ ।
पीडाभित्रै खुसी खोज्नुपर्ने रहेछ !
गन्थनको उचित मन्थन भएमा नयाँ विचारले जन्मने मौका पाउँदो रहेछ । शिक्षक हुँदाका पीडा थुप्रै छन् । तर पनि पीडाभित्र सुख खोज्नु पर्दोरहेछ । सुख आफैं झ्याली पिटेर आउँदो रहेनछ । मुखमा गास पार्न र सास जोगाउन शिक्षकहरुलाई कठिन हुँदोरहेछ ।
धेरैजसो चार्डपर्वहरुमा इज्जत जोगाउन मुस्किल पर्दो रहेछ, यस पेसामा । आफन्ती टाढा हुँदा रहेछन्, मास्टरको जागिर भनेपछि त । बुझ्नेले नाक खुम्च्याएको देख्दा आफैंलाई पश्चाताप हुन नलागेको कहाँ हो र ? तर जे भएपनि दुनियाँका छोराछोरीहरुलाई अँध्यारो कुनाबाट निकाली शिक्षाको उज्यालो प्रकाशद्वारा प्रदीप्त गराउन पाउँदा मनमा आनन्द लाग्छ ।
एसएलसी पास भए मेरै छोराछोरीले कडा मेहनत गरेर रातभर पढेर पास भएको हो भन्छन् । फेल भए मास्टरले पढाउने भए पो पास हुन्छन्
भनेर धारे हात लगाउँछन् । कस्तो पेसा अपनाइएछ भनेर दुःख पनि लाग्छ । तर, यी त सब भन्ने कुरा न हुन् ! भनी चित्त बुझाउन पर्नेरहेछ ।
फुर्सदको समय साहित्यलाई
इच्छा घुमेर खाने छ । तर सधैं नपुग्ने रहेछ । तै पनि घुमेका ठाउँबारे र आफ्ना अनुभवहरुलाई अक्षरमा कुँद्न मन लाग्छ । शब्दका स्तम्भ तयार पार्न मन लाग्छ । फुर्सदमा पनि त्यसै घरै बस्न मन लाग्दैन । ससानो कुरालाई गहिरो अध्ययन गरी शब्दको जालमा पार्न मन लाग्छ । शिक्षण पेसामा लागेपछि ‘नसोध मलाई’ गीतिनाटक प्रकाशन गरें । जुन नाटकलाई समालोचक एवम् विश्लेषक गोपीरमण उपाध्यायले समीक्षा गर्दा जनस्तरबाट सम्मानित ‘सिम्मा’ नाटकसँग तुलना गर्नुभएको थियो । जुन राष्ट्रिय दैनिक जनसंघर्षमा प्रकाशित भएको थियो ।
त्यसपछि नेपालमा पहिलोपटक प्रयोगको रुपमा चट्नी संग्रह ‘आस्थाका स्वर’हरु प्रकाशन गरें, त्यो नितान्त नौलो आयाम थियो साहित्य क्षेत्रमा । जसको विमोचन तत्कालीन राष्ट्रियसभाका सदस्य रामचन्द्र भट्टराईले गर्नुभएको थियो । विमोचन कार्यक्रममा राष्ट्रिय गजलकार बुँद राना, कवि मुरारी पराजुली, गिरि श्रीस, अर्जुन पौडेललगायतका साहित्यिक व्यक्तिहरुको दोभानमा बाक्लो उपस्थिति थियो ।
बालबालिकाका लागि ‘हात्ती करायो’ नामक बालगीति पुस्तिका हालै प्रकाशन गरेको छु । मास्टर पेसा पैसाको जहिले पनि संकट, नत्र ‘रेक्सा’ कवितासंग्रह र ‘चिठ्ठी साहिँलीलाई’ यात्रासाहित्य प्रकाशन गर्थें हुँला !
फुर्सदमा लेख्न र पढ्न मन लाग्छ । अहिले लेखनको गति कम भइसकेको छ । कविता प्रतियोगितामा भैरहवा, बुटवल, नवलपरासी धेरै ठाउँ पुगियो । पुरस्कार पनि छामियो । लोककवि अलिमियाँ, प्रसिद्ध कार्टुनिष्ट वात्सायन, म्यागासेसे पुस्कार विजेता महावीर पुन, मदन पुरस्कार बिजेता सरुभक्त, गुरुकूलका अनुप बरालसँगको भेट सम्झन लायकका छन् । यी पुराना दिन स्मृतिको मानसपटलमा नाचिरहन्छन् ।
प्रकाशित: २०७८ साउन २ गते ८:०५